3 Fureyaasha Casriyaynta Khibradaha Bakhaarka ... iyo Dakhliga | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 20, 2015 Isniin, Oktoobar 19, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan u dukaameystay dukaanka cusub Suuqa Kroger. Xusuus-qor… haddii Kroger keliya uu u maleynayay in maal-gashigooda joogitaankooda internetka ay muhiim u ahayd joogitaankooda tafaariiqda. Waan duugaa. Suuqa cusub waxaa laga dhisay wadada dhinaceeda halkii hore ee Kroger. Hal talaabo gudaha ah waadna arki kartaa sababta.
Foornada rootiga rootiga lagu farsameeyo ee rootiga loo yaqaan 'Artisan root', xayeysiin leh miiska farmaajo oo go'an, Starbucks, miisaska sushi, iyo dukaamaysi hal-joog ah oo loogu talagalay dhallaanka, caruusadaha, qolka jiifka, musqusha, dahablayaasha, iyo jikada. Xitaa waxay lahayd makhaayad iyo qaybta fasaxa. Dukaankan weyn ayaa leh dhammaantood. Mise waa
Markii aan dhex socday dukaanka aniga oo raadinaya saabuunta dharka lagu dhaqo, waxaan ogaaday waxtarka qaar. Mid ka mid ah furaha ayaa ah in qaybta tooska u ah hor-u-socodka ay u egtahay dukaanka dukaanka ku dhex yaal. Ma u baahan tahay inaad soo qaadato xoogaa caano ah iyo khudaar daray ah (xitaa gudaha laga beero)? Waad geli kartaa oo ka bixi kartaa daqiiqado yar gudahood. Safarkeygu wuxuu qaatay dhowr saacadood sidii aan ku bartay gees kasta oo ka mid ah dukaanka.
Si aan u helo saabuunta dharka lagu dhaqo, waa inaan kor u fiiriyaa calaamadda ii tilmaamaysa marinka 48. Waxaan dib ugu soo laabtay koonahaas bakhaarka, waxaan soo qaatay Mawjaddayda, waxaanna ku soo wareegay wareegga… halkaas oo dhammaan caafimaadka, waxyaabaha cusub yahay. Waxaan qabtay Starbucks, nasasho ayaan qaatay, ka dibna waan hubiyey.
Khibradda dukaanku waxay lahayd saddex-meelood laba meel habka loo noqdo kaamil. Sawir gacmeedkan laga soo qaaday Moki wuxuu ku saleysan yahay Forrester's Mustaqbalka Bakhaarka Dijital ah. Waxay tilmaamaysaa jidka loo maro waxa saddexda fure u jira khibrad casri ah oo dukaan ku dhex yaal:
Dulucda - Waxaan u maleynayay in qeybaha cusub ay hagaagsan yihiin. Waxaa jira Wal-mart dhinaca kale ee isgoyska, laakiin adigoo ah dukaan raashin oo leh waxyaabo kale, Kroger wuxuu siiyaa xulasho aad u fiican qoyska. Xaqiiqda ah inaan soo qaadan karo shumac xargo cusub, bourbon heer sare ah, ama digsi shiil ayaa muujineysa in Kroger uu fahamsan yahay macaamiisheeda.
Muhiimad Leh - Qaybaha xilliyeed iyo ku habboonaanta waa kuwo cajiib ah. Waxaan iska ilaalin jiray inaan tago Kroger-kii hore si aan uqaato kiriimyada qaxwada maxaa yeelay waxay ubaahantahay safar guud ahaan dukaanka hal iibsi. Waxaan aadi lahaa dukaanka raaxada ee deegaanka. Hadda waan aadi karaa Kroger oo waxaan ka qaadan karaa xoogaa cunno cusub ah, sidoo kale!
Shakhsiga - Halkani waa halka ay Kroger ka jirto fursad ay ku kordhiyaan khibradooda dukaanka. Haddii ay kaliya lahaan lahaayeen isgaarsiinta goobta u dhow ee ku duugan codsigooda moobiilka, laga yaabee qaar ka mid ah nalalka bakhaarka ku jira, iyo qaar ka mid ah bandhigyo firfircoon halkii miisaskii hore ee iskuulka, aad ayaan uga xumaan lahaa dhammaan hantida maguurtada ah si aan u daboolo. Iyo, haddii Kaadhkayga Plus uu diiwaangashan yahay, xitaa way iga samayn karaan xoogaa dalabyo ah inta aan dhex marayo dukaanka.
Waxa ugu weyn ayaa ah in dukaanku uusan u baahnayn in dib loo naqshadeeyo - waa dukaanka epic. Shakhsi ahaan, waxaan jeclaan lahaa inaan arko kuraas wanaagsan iyo sariir lagu rusheeyo dukaanka oo dhan. Inta badan dadku waxay ku sii jeedaan - waxay sii fikiraan waxa ay u baahan yihiin inay iibsadaan. Waxaan istaagay Starbucks ka dibna waan aaday oo waxaan soo qaatay darsin kale ama wax kale.
Kroger waxaa laga yaabaa inuu ka faa'iideysto iyadoo la xoojinayo tiknoolajiyada lagu dhex isticmaalo. Markii aan iska hubiyey, haweeneyda iga dambeysa ayaa neef qabatay waxaan qabaa gaari yar oo wadar ahaan lacag ah. Ma aysan arkin Mahi, Woodford Reserve, iyo Shumaca xarigga Sandalwood ee aan iibsaday. Waxaan u maleynayaa in aan ku bixiyay laba laab intii aan filayay.
Waxaan qiyaasi karaa oo kaliya waxa aan ku bixin lahaa haddii safarkaygu ahaan lahaa shakhsi!
Tags: dukaan ku jirawaayo-aragnimada dukaankakrogersuuqa krogertafaariiqdatafaariiqda tafaariiqdadukaanka